Ukusetyenziswa kwetanki yokuxuba kwiimveliso zemichiza zemihla ngemihla
ngomphathi ku 19-04-01
Umshini we-tank emulsification tank shampoo umenzi
Kutshanje, inkampani eyaziwayo ye-shampoo iyalele i-vacuum emulsification izixhobo ezi-8 ukuba zisetyenziswe njengemigca yokuvelisa ishampu. I-Shampoo ngumenzi owaziwayo weeshampu zokulwa ne-dandruff e-China. I-shampoo eveliswa kwimarike iyimveliso ephakathi ukuya phezulu. Izixhobo zokuxuba nokuxuba ...
Izixhobo zemveliso yokunonga
Qiangzhong izixhobo zokukhupha itanki, umzimba wetanki wenziwe ngezinto zentsimbi ezikumgangatho ophezulu, ezilungele uxinzelelo lomoya, uxinzelelo oluncinci, ukucocwa kwamanzi, ukuntywiliselwa okufudumeleyo, ukufudumeza ubushushu, ukujikeleza okunyanzelekileyo, ukuhanjiswa kweoyile enencasa kunye nokunyibilikiswa kwendalo kwisiTshayina sam .. .
Izixhobo zokuvelisa ubhiya
I-Qiangzhong inamava abanzi kwishishini lezixhobo zokusela, ibonelela ngezixhobo ezikhuselekileyo nezithembekileyo kuzo zonke iintlobo zabavelisi besiselo. Ukunyaniseka okunamandla kukwabonelela uyilo, ukwenziwa, ukufakwa, ukugcinwa, uphuculo lobuchwephesha kunye nezinye iinkonzo zemveliso yesiselo ...
Izixhobo zokuvelisa ukutya
Izinto zikaQiangzhong kwizixhobo zokutya zonke zenziwe ngomgangatho ophezulu wesinyithi somatshini ongenazintsimbi. Inembonakalo yobunewunewu, umphezulu ogudileyo kunye nokusebenza kakuhle kwesakhiwo. Ipholile ngaphakathi nangaphandle, akukho kungcoliseka, akukho kuvuza, kukhuselekile kwaye kuthembekile. NgoFebruwari 2014, a ...
Ukusetyenziswa kwezixhobo ze-emulsification kwishishini lesiselo
Uninzi lweziqhamo kunye nejusi yemifuno kukusasazeka okungafaniyo kolwelo oluqinileyo, ulwelo-ulwelo, kunye neetanki zeemulsion, iitanki ezixhokonxwayo, kunye neempompo ze-shear emulsification ephezulu ziyafuneka ukufikelela kwinqanaba eliphezulu lokufana. Itanki yokumisela, itanki yokuxuba, shear ephezulu emulsificati ...
Izixhobo zokuvelisa imveliso yobisi
Izixhobo ngoomatshini Qiangzhong lisetyenziswa ngokubanzi kwimveliso kunye nokuveliswa kwemichiza, ukutya, amayeza, zebhayoloji kunye nezinye iimveliso mveliso. Inkqubo yemveliso yeQiangzhong, inkqubo yobuhle, umgangatho kunye nobunzima. Izixhobo ezisetyenziswa Qianzhong Machinery for dai ...
Elungiselelweyo itanki yokuxuba
Izixhobo zokuvelisa amayeza
Izixhobo ngoomatshini Qiangzhong lisetyenziswa ngokubanzi kwimveliso kunye nokuveliswa kwemichiza, ukutya, amayeza, zebhayoloji kunye nezinye iimveliso mveliso. Inkqubo yemveliso yeQiangzhong, inkqubo yobuhle, umgangatho kunye nobunzima. Imathiriyeli ekrwada yeQiangzhong Pharmaceutical Eq ...
Ukusetyenziswa kwetanki yokuxuba kwimveliso yezichumisi ezingamanzi